warkii.com » Ruushka oo uga digay Turkiga in Aya Sophia markale loo badalo Masjid
Ruushka oo uga digay Turkiga in Aya Sophia markale loo badalo Masjid
Mas’uuliyiin ka tirsan Ruushka iyo Kaniisadda Orthodox ee Ruushka ayaa ku booriyay Turkiga inay ka digtoonaadaan dadaallada ay ugu soo celinayaan matxafka Aya Sophia ee magaalada Istanbul masaajid, maadaama ay “qiimo muqadas ah” u leedahay Ruushka waa sidey hadalka u dhigeene.
Golaha Dowlada turkiga oo ah maxkamadda ugu sareysa ee Maamulka Turkiga ayaa xukun ka gaarista arintaan ka fiirsaneyso xili dhawaan laga soo saari doono xukunka tallaabadaas oo xiisad ka dhex abuuri karta Reer Galbeedka iyo bulshada Masiixiyiinta ah.
Madaxa Kaniisada Orthodox, Patrick Kirill ee Russia ayaa arintaan ka muujiyay walaac qoto dheer asigoona ku booriyay in laga fiirsado tallaabadaan, xili uu Aya Sophia ku tilmaamay “mid ka mid ah raadadkii ugu weynaa ee dhaxalka masiixiga.”
Bayaan uu soo saaray ayuu ku yiri; “khatar kasta oo ku xeeran Aya Sophia waxay khatar ku tahay ilbaxnimada masiixiyiinta oo dhan, sidaas si lamidna waxay khatar kutahay qiyamkeena ruuxiga ah iyo taariikhdeenaba.”
Dhanka kale afhayeen u hadlaayay xukuumada Kremlin Dmitry Peskov ayaa wuxuu sheegay in mustaqbalka goobtaan taariikhiga ah ay tahay mas’alad gudaha Turkiga khuseyso balse ayadoo sidaas ay tahay hadana ay rajeynayaan in xaaladda Aya Sophia loo tixgelin doono inay tahay goob dhaxal ah oo adduunka dhan ka dhaxeyso maadaama ay tahay goob qiimo gaar ah uleh bulshooyinka Muslimka iyo Masiixigaba.
Waxaa xusid mudan in Aya Sophia la dhisay qarnigii 6aad ee Miilaadiga ayadoona Kaniisad aheyd balse qarnigii 15aad ayay khilaafadii Cusmaaniyiinta furteen ayagoona u badaleen Masaajid balse markii la riday khilaafadii Cusmaaniyiinta ayuu Madaxweynihii hore ee Turkiga Mustafa Kamal u badalay Matxaf xili sidoo kale Masaajido badan oo Turkiga ku yaalay la burburiyay qaarkoodna bakhaaro iyo xerooyin fardaha lagu xareeyo laga dhigay.
Dhawaanahaan waxaa socday qorshe dib boorka looga jafaayo laguna doonaayo in markale Masaajid laga dhigo xili Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ku tilmaamay talaabadii Matxaf looga dhigay Gaf weyn.